के होला सन्तोष सेनको दिमागमा ? | kollywood Update
के होला सन्तोष सेनको दिमागमा ?
कलिउड अपडेट । निर्माता सन्तोष सेन नेपाली फिल्मको स्तरउन्नतीको लागी हरेक मिनेट सोचिरहेका हुन्छन् । यहाँ त जुन प्रकारका फिल्म हिट हुन्छन् त्यसैका पछि दौडिनेको भिड लाग्छ । तर निर्माता सन्तोष सेन भने आफ्नो बाटो आफै खोज्छन् र बाटो बनाउछन् र दौडिन्छन् ।
बारम्बार लभस्टोरी जनरामा फिल्म बनाउदै आएका सन्तोष सेन एक्कासि चाइल्ड साइकोलोजीमा फिल्म बनाउन थाले । कसैले पनि सोचेको थिएन होला कि एक पछि अर्को सफल लभस्टोरी फिल्म दिएका निर्माता सेनले एक्कासि चाइल्ड साइकोलोजीमा मेरी मामु निर्माण गर्छन् भनेर । कुन बेला कुन बिषयले उनको दिमागमा छुन्छ थाहै हुदैन । निर्माता सेनको दिमागमा यस्तो बिषय चल्छ जुन बिषय न अरुले उठाएको हुन्छ न उठाउने हिम्मत नै गर्न सक्छ ।
व्याबसायीक फिल्म दिएका निर्माता सेनको दिमागमा के चल्यो र उनले बच्चाको साइकोलोजी को बिषय उठान गरे । जुन नेपाली फिल्मका व्यापारको लागी रिक्स हुन पनि सक्छ । तर बिजनेश र स्टोरि बिष्लेषणमा आषुषेन फिल्मस्को टिम यस अघिका फिल्मले सक्षम छ भन्न सकिन्छ ।
नेपाली फिल्मको चलिरहेको ट्रेन्ड जस्तै लभस्टोरी , एक्सन र कमेडि भन्दा नेपाली फिल्मलाइ फराकिलो पार्न पनि यस्तो बिषय रोजेको निर्माता सेनको भनाइ छ ।
यदि मेरी मामु ले व्यापार र समिक्षामा सफलता पायो भने यहि बिषयमा फिल्मको बाडि लाग्ने पक्का छ ।